FBC - Itiyoophiyaan Fooramii ‘Belt and Road’ Chaayinaatti geggeeffamu irratti nihirmaatti
FBC Kibxata Caamsaa 14 2010 E.C. - Tuesday, May 22 2018 G.C.
Itiyoophiyaan Fooramii ‘Belt and Road’ Chaayinaatti geggeeffamu irratti nihirmaatti
Finfinnee, Ebila 13, 2009 (FBC) Yaa’ii Walta’iinsa Idil-addunyaa Fooramii ‘Belt and Road’ Chaayinaatti Caamsaa dhufu geggeffamu irratti Itiyoophiyaa fi Keeniyaa dabalatee biyyoota 28 mirakaneeffannaan hirmaannaa kennamuusaa maarsariitiin Ministeera Dhimma Alaa Chaayinaa barreesseera.
Yaa’ii kanaarratti Barreessaan Olaanaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Antooniyoo Guutareez, Pireezdaantiin Baankii Addunyaa Jiim Yoong Kiim fi Daayirektarri Fandii maallaqaa idil-addunyaa Kiristiyaan Laagaard irratti argamu.
Waliigalaan hayyuleen 1,200, qondaaltonni mootummaa fi bakka-buutonni dhaabbilee sab-quunamtii akkasumas hirmaattonni biyyoota 110 fi dhaabbilee idil-addunyaa 61 irraa wal-ga’an irratti argamu jedhameera.
Ya’ii kanaarratti Chaayinaan biyyoota 20 waliin waliigaltee tumsaa nimallatteessiti jedhamee eegama.
Xiyyeeffannoon yaa’ichaas bu’uura misoomaa, industirii invastimantii, walta’iinsa dinagdee fi daldalaa, humnaa fi qabeenya uumamaa , maallaqaa fi aadaa irratti ta’a jedhameera.
Madda: Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa
Oduuwwan Biroo « Ji’oottan 2n darban dhiha Tigraayitti humnoonni farra nageenyaa 98 to’annoo jala oolaniiru	Waldaaleen hawaasummaa ijaarsa demokraasii keessatti ga’eesaanii akka ba’atan mootummaan ni deeggara »